Забур 4 CARS - Nnwom 4 AKCB
1Sɛ misu frɛ wo a, gye me so,
me trenee Nyankopɔn.
Ma me ɔhome wɔ mʼahohia mu;
hu me mmɔbɔ na tie me mpaebɔ.
2Enkosi da bɛn na mobɛdan mʼanuonyam ahohora?
Enkosi da bɛn na mobɛdɔ nneɛma hunu na moadi ahoni ahuhuw akyi?
3Hu sɛ Awurade ayi nea ɔwɔ nyamesu ama ne ho;
Awurade betie, sɛ misu mefrɛ no a.
4Sɛ mo bo fuw a, monnyɛ bɔne;
monyɛ komm na monhwehwɛ mo koma mu.
5Mommɔ afɔre a ɛfata
6Nnipa bebree bisa se:
“Hena na ɔde yiyeyɛ bɛbrɛ yɛn?”
Awurade, ma wʼanim hann no nhyerɛn yɛn so.
7Fa anigye mmoroso hyɛ me koma ma
bere a wɔn aburow ne nsa foforo abu so no.
8Mɛtɔ hɔ, na mada asomdwoe mu,
efisɛ wo nko ara, Awurade,
na woma metena dwoodwoo.
AKCB : Nnwom 4